अविवाहित नायिका आँचल शर्माले किन गरिन विवाहित उदीप श्रेष्ठसंग विवाह ? – Etajakhabar
काठमाण्डौ ।‘नाईं नभन्नू ल ४’ बाट नेपाली फिल्ममा भित्रिएकी अभिनेत्री आँचल शर्माले डेढ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेकी छन् । बिहीवार उनले प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कसेकी हुन् । बुढानिलकण्ठस्थित होटल पार्क भिलेजमा हिन्दू परम्पराअनुसार आँचल र उदिपले विवाह गरेका हुन् । विवाह समारोहमा दुलहा र दुलही पक्षका परिवारको मात्र उपस्थिति रहेको थियो ।
यसै क्रममा नेपालमा फिल्म जगतमा नायिकाहरुले धमाधम विवाह गर्ने क्रम चलेको छ । धेरैले चलचित्र क्षेत्रभन्दा फरक विधाका पुरुषसँग विवाह गरेका छन् ।
चलचित्र क्षेत्रकै नायकसँग कतिपयको प्रेम चल्यो तर टुट्यो पनि । चलचित्र क्षेत्रको भन्दा भिन्न विधाका पुरुषसँग नायिकाहरुले विवाह गर्न थाले । यसमा अहिले नायिका आँचल शर्मा जोडिएकी छिन् ।
आँचलको कुनैबेला पल शाहसँग अफेयर चल्यो । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै विवाह गर्ने घोषणा गरे । तर, यसै हप्ता आँचलले सबैलाई चकित पार्दै चिकित्सक डा. उदिप श्रेष्ठसँग विवाह गरिन्, त्यो पनि करोडौं खर्च गरेर ।
पलबाट टाढिने क्रममा आँचलले फेसबुकमा अनफलो गरिन् । लगत्तै फेसबुकमा विवाहको तस्बिरहरु हालिन् । आँचलले विवाह गरेका उदीप श्रेष्ठको दोस्रो विवाह हो । उनको यसअघि विदेशीसँग विवाह भएको थियो । आँचलले पलसँग कसम तोड्नुमा उदिपको धनसम्पत्ति हो भन्ने चर्चा फिल्मी क्षेत्रमा चलेको छ । उदिप धनी परिवारका हुन् ।
चलचित्र क्षेत्रमा नाम हुने तर दाम कमै हुने भएकाले पनि नायिकाहरु पैसावाल पुरुषसँग विवाह गर्दै आएका छन् । चलचित्रबाट नाम कमाउने र त्यही नामबाट धनाढ्य पुरुष खोज्ने परिपाठी समेत विकास भएको छ । रिपोटर्सक्लब नेपाल बाट साभार
Posted on: Sunday, March 15, 2020 Time: 8:44:17
बाँकेमा स्कुटरलाई ठक्कर दिएर जिप खेतमा पल्टियो
-20547 second ago
-19588 second ago
-18493 second ago
-17692 second ago
-15579 second ago
-13070 second ago
-10728 second ago
विमानस्थलमा लागु भयो नयाँ नियम ! बिमान कम्पनि र यात्रुले अवस्य पालना गर्नुपर्ने छ यी नियम !
-9679 second ago